किशोर अवस्था, यौन शिक्षा र व्यवहारिक ज्ञान — Ratopost.com News from Nepal
किशोर अवस्था, यौन शिक्षा र व्यवहारिक ज्ञान
स्वास्थ्य।किशोरावस्थामा प्रवेश गरेपछि यौनसम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा उठ्न थाल्छन् । यस्ता जिज्ञासाहरूको समाधान कसरी पाउने भन्ने चासो सबैलाई थाहा हुन्छ तर धेरैले भन्न सक्नदैनन । किशोरकिशोरीहरूका शरीरमा विभिन्न किसिमका परिवर्तन आउन थालेपछि उनीहरूको बाह्य क्रियाकलापमा पनि कमी आउने अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा आवेशमा आएर गलत बाटोतर्फ अग्रसर हुने सम्भावना हुन्छ । यस्ता जिज्ञासाको जानकारी समयमै प्राप्त भए उनीहरू गलत दिशातर्फ जानबाट रोकिन्छन् ।
यौनका सम्बन्धमा किशोरकिशोरीहरूको जिज्ञासा कसरी समाधान गर्ने भन्ने बहस प्राचीनकादेखि नै चलिआएको छ । यौन क्रियाकलापमा बढी रुचि हुने किशोरकिशोरीहरूमा बाल्यकालमा आमा बन्ने समस्या देखापर्छ भने कम जिज्ञासाले उनीहरूमा हीनताबोध हुनथाल्छ । यद्यपि अभिभावकले किशोरावस्थामा उनीहरूको अङ्गमा आएको परिवर्तन, उनको आवश्यकता एवं मानसिक स्तरअनुसार सम्झनुपर्छ । जसले उनीहरू अझ बढी कामुक नबनून र व्यवहारिक रूपमा अघि बढून् भन्ने कुरामा विशेष सचेत हुनुपर्छ ।
कुनैपनि तरिकाबाट यौनका सम्बन्धमा जानकारी दिनुपूर्व अभिभावकले किशोरकिशोरीहरूसँग मित्रवत् व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । उमेर तथा उनीहरूसँगको सम्बन्ध तगारो नबनोस् भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ । उनीहरूको विश्वास तपाईंप्रतिको हुनुपर्छ । मातापिताले आफ्ना किशोरकिशोरीहरूमा के—कस्ता परिवर्तन आइरहेका छन् बुझ्नुपर्छ । यदि उनीहरूले कुनै कुरा सोध्ने गरेका छैनन भने आफै सतर्क हुनु उचित हुन्छ । उनीहरू खुसी रहने, दुखी रहनु धेरे बोल्नु, कम बोल्नु, एक्लै बस्नु आदि कुरामा राम्रासँग ध्यान दिएर कारण सोध्नुपर्छ । विकल्प वा उदाहरण दिएर उनीहरूको मनमा के कुरा खेलिरहेको छ बुझ्ने प्रयास गर्नु उचित हुन्छ ।
यौनसम्बन्धी ज्ञान दिनुपूर्व यौनको आवश्यकता, महत्व र प्राथमिकताका सम्बन्धमा बुझाउनु पर्छ । यौनका सम्बन्धमा डर, त्रास देखाएर भ्रममा पार्नुहुँदैन । यौन शिक्षाको अर्थ संभोग कला बुझाउनु मात्र नभएर त्यससँग सम्बन्धित सबै व्यवहार परिवर्तन, आवश्यकता आदि विषयमा बुझाउनु एवं सतर्क गराउनु हो । यसो नभए गलत धारणा वा भ्रम सिर्जर्ना हुने सम्भावना रहन्छ जसले गर्दा हीन भावना बढनसक्छ र उनीहरूको आत्मविश्वास पनि घट्नसक्छ । किशोरकिशोरीहरूले यस्ता पुस्तक, इन्टरनेट, पोर्ने साइटको वा गलत संगतले यौनका सम्बन्धमा आधा, अधूरो वा गलत ज्ञान आर्जन नगरून् भन्ने विषयमा ख्याल राख्नुपर्छ । किशोरकिशोरीहरूले कस्तो चित्र हेर्छन ? टिभीमा कस्तो कार्यक्रम हेर्न रुचाउँछन् ? कस्तो चलचत्रि मनपराउँछन । इन्टरनेटको के—कस्तो साइड सर्च गर्छन ? फोनमा कोसित कस्तो कुरा गर्छन् ? कोठामा बस्दा एक्लै के गर्छन् ? राति किन अबेरसम्म बस्छन् ? आदि कुरा राम्रसँग बुझी एक्लै भएको अवस्थामा सम्झाउनुपर्छ । सबैका सामु यौनसम्बन्धी कुरा गर्दा गलत सन्देश जान सक्छ ।(स्राेत:विकिपिडिया)
मेगा बैकले दियो विपन्नवर्गका दुई छात्रालाई छात्रबृत्ति
प्रहरी कार्यालयभित्र पुस्तकालय स्थापना
‘उकुसमुकुस’ कमेडी सिरियलको प्रशारण सुरु
चट्याङले लाग्दा स्याङ्जामा १५ वर्षीय किशोरको मृत्यु
“लेखमा भेडी” बाेलकाे गित मार्फत अभिनयमा रामेछापका मनाेजकाे डेभ्यु